September 5, 2020 September 5, 2020 adminLeaveaComment on के पि ओलि भि•जन वि°हिन हुनुहुन्छ, ,डा खतिवडा ओलिको छाँ’यामा प’र्नुभयो-भट्टराई
नेपाल राजत’न्त्रबाट गणत’न्त्रमा गएको, एका’त्मकताबाट सं’घीयतामा गएको, जुन प’रिवर्तन आएको छ लो’कतान्त्रिक प’रिवर्तन र अ’र्थतन्त्रको त्य’हि ढ’ङ्गले पु’रानै सा’मन्ति, अ’र्धसामन्ति अर्थात, नि’र्वाहमुखी कृषि प्र’धान अ’र्थतन्त्र थियो । त्यसलाई औ’द्योगिक अ’र्थतन्त्रमा रु’पान्तरण गर्न सं’रचनात्मक प’रिवर्तन चाहिन्छ, एक प्र’कारले वि’शेष ध’क्का दिनुपर्छ । यसका लागि उपयु’क्त बेला आएको थियो ।
केपी ओली ने’तृत्वमा सु’विधाप्राप्त जुन ब’हुमतको स’रकार छ । त्यो स’रकारका अ’र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई औ’द्योगिक अ’र्थतन्त्रमा रु’पान्तरणको निम्ति ध’क्कामुलक ढ’ङ्गले नी’तिगत रुपमा क्षे’त्रगत रुपमा प्रा’थमिकता कि’टान गरेर बजेट लगायतका नी’ति ल्याउनुपर्छ भन्ने सु’झाव दिएको थिएँ ।दु’खःका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले यतापट्टी ध्यान दिनुभएन । या त प्र’धानमन्त्री लगायत पा’र्टीको का’रणले गर्दा सक्नुभएन या उहाँ आफैंले चाहनु भएन वा बुझ्नु भएन ।यो तीन वर्ष अ’र्थतन्त्र जुन ढ’ङ्गले अगाडि बढाइयो, कुनै स’कारात्मक प’रिवर्तन ल्याएन ।
हामीले सं’सदीय व्य’वस्था अ’पनायौं । यसमा मु’ख्य भू’मिका प्र’धानमन्त्रीकै हुन्छ । त्यसले अ’र्थमन्त्रीले चाहेर मात्रै धेरै गर्न सक्दैन । तर गु’णात्मक नभएपनि मा’त्रात्मक अ’न्तर गर्न सकिन्थ्यो । यस हि’सावमा अ’र्थशास्त्रको प्र’शासनिक क्षे’त्रमा लामो समय भू’मिका नि’र्वाह गर्नुभएका डा. खतिवडाबाट मान्छेले धेरै अ’पेक्षा गरे । म आफैंले पनि केही शं’कासहित अ’पेक्षा गरेको थिएँ ।
किनकी विशु’द्ध प्रा’विधिक मान्छेले हाम्रो जस्तो सं’क्रमणकालीन समाजको अ’र्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्दैन । अ’र्थ रा’जनीतिज्ञ पनि चाहिन्छ । उहाँ आफैं वामप’न्थी पृ’ष्ठभूमिको र क’म्युनिस्ट पा’र्टीसँग पनि जोडिँदै आएको र अ’र्थतन्त्र बुझेको व्य’क्ति हुनाले उहाँले आफ्नो प्रा’वधिक द’क्षताको समि’श्रणबाट अरु भन्दा स’कारात्मक भू’मिका नि’र्वाह गर्नुहुन्छ कि भन्ने अ’पेक्षा मैले गरेको थिएँ ।
उहाँले तीन वटा ब’जेट ल्याउनुभयो । पछिल्लो लो’कतान्त्रिक प्र’क्रिया खासगरी ग’णतन्त्रपछि कसैलाई त्यो सु’विधा प्रा’प्त भएको थिएन । त्यो अ’वसर उहाँले गु’माउनुभयो । उहाँबाट जुन अ’पेक्षा गरिएको थियो, त्यो पु’रा हुन सकेन ।
उहाँलाई मात्रै दो’ष दिन चाहन्न । किनकी सं’सदीय प्र’णालीमा प्रधा’नमन्त्रीको दृ’ष्टिकोण नै प्र’मुख हुन्छ । हाम्रा प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओली भि’जनबिहीन हुनुहुन्छ, ग’फाडी शै’ली, आफूलाई मात्रै स’र्वज्ञानी ठा’न्ने र अरुलाई नसु’न्ने प्र’वृति छ । त्यसले ग’रुडको छा’याँ परेको स’र्प जस्तो हुन्छ, प्र’धानमन्त्रीको छा’याँमा परेर उहाँले प्रा’वधिक ज्ञा’नको पनि ठीक ढ’ङ्गले प्र’स्तुत हुन पाएन भन्ने लाग्छ । त्यसैले अर्थ’मन्त्रीको अ’सफलता मु’ल रुपमा प्र’धानमन्त्रीको ने’तृत्वको अ’सफलता हो ।
य’द्यपि प्रा’वधिक ढ’ङ्गले वि’शेषज्ञता प्रा’प्त अ’र्थमन्त्रीले पनि अ’लिकति पद चि’न्ह छोड्न स’क्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन । अ’पेक्षा र देशको आ’वश्यकता अ’नुरुप काम गर्न सक्नुभएन ।स्रो:त अनलाइन खबर